Wariyayaal Tijaabinayey Awooda Laamaha Amaanka Oo Lagu Xidhay Dalka Maraykanka. | Awdalmedia.com
Saddex ka mid ah shaqaale Telefishin ayaa lagu xidhay garoon ku yaala dalka Mareykanka ka dib marka sida la sheegay ay isku dayeen in ay garoon ka dhoofiyaan bambo been abuur ah oo ay la mareen halka ay ciidamada ammaanka wax ku baadhaan.
Dhacdadan ayaa khamiistii ka dhacday Newark Liberty oo ku yaalla New Jersey.
Saraakiisha gaadiidka ayaa waxay sheegeen in boorso ay ku jiraan waxyaabo dhammaan laga samayn karo walxaha qarxa lagu qabtay markii ay soo maraysay goobta wax lagu baadho.
Warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay ku warantay in kooxdani wariyayaasha ay qayb ka ahaayeen shirkad samaysa barnaamijyo muuqaal ah ttasai oo gacan saar la leh TV-ga CNBC.
Shirkadda oo lagu magacaabo, Endemol Shine North America, ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dhacdadani ay ahayd baadhitaan ay samaynayeen ayna laamaha dowladda la shaqaynayeen.
"waxa aan raali galin ka bixinaynaa carqalad kasta oo dhacday," ayaa lagu sheegay bayaanka.
Telefishinka CNBC ayaan dhankooda wali ka hadlin dhacdadani.
Wariyayaasha ayaa la sheegay in ay doonayeen in ay muqaal iska duubaan iyaga garoonka la dhex maraya waxyaabahani qarxa ee been abuurka.
Arrintani ayaa qayb ka ahayd baadhitaan ay samaynayeen wariyayaashani.
Ila wareedyo uu soo xigtay wargayska New York Daily News ayaa muujinaya in kooxadani wariyayaasha ah ay doonayeen in ay duubaan sida ay uga fal celiyaan saraakiisha waaxda maareynta ammaanka gaadiidka iyo sida ay shacabka caadiga ah uga fal celiyaan.
Kooxdani wariyayaasha ah ayaa imika wajahaya in ay maleegeen oo ay abuureen qalqal dadwayne.